. कोटा र कोठामा फरक छ ,दलितको योग्यता माथी प्रश्न गर्ने को हो?::Online News
भर्खरै : कोटा र कोठामा फरक छ ,दलितको योग्यता माथी प्रश्न गर्ने को हो?
कोटा र कोठामा फरक छ ,दलितको योग्यता माथी प्रश्न गर्ने को हो?
निरक्षर , साक्षर र शिक्षित के त्यि शब्दको अर्थ एउटै हुन्छ त? योग्यता क्षमता र दक्षताको शब्दको अर्थ एउटै हो त ,?हैनन । मापन लेखाजोखा र मुल्यांकन एउटै हुन त?हैनन। यस्तै यस्तै कुराको यथार्थ धरातलमा नटेकेर टिप्पणी गर्ने कतिपय मानिसहरूको जमातले सामाजिक सञ्जालमा दुर्गन्ध फैलिएको छ । डिग्री तिम्रो योग्यता हो /आयोग लडेर नाम निस्कनु ननिस्कनु तिम्रो क्षमता हो । नाम निकालेर सेवा प्रदायकलाइ सन्तुष्ट राख्नु /नराख्नु तिम्रो द्क्षता हो ।त्यसैले डिग्री सबैले गर्छन ,डिग्री गरेजती सबै बिक्री हुदैनन । १८ बर्षे कक्षा १२ पास गरेको भाइ र ३० बर्षे डिग्री पास गरेको काकाको प्रतिस्पर्धामा आयोगको खरदार पदको सिफारिसको अयोगमा १८ बर्षको भाइको नाम निस्कियो अब,डिग्री वाला काकाले दोष दलित माथी लगाउछ, कि उमेरको उस्ले आफ्नो कमजोरी महसुस गर्दैन ,गर्व गर्छ । उमेरले ३५ नाघे पछि उ न खेतबारीमा काम गर्छ न ब्यापारमा सघाउछ । अन्तिममा बिदेश जान्छ ।वैदेशिक रोजगार मेरो बाध्यता थियो भन्दैन तर,दलित आरक्षणको कारण डिग्री गरेको खाडीमा छु भन्ने कुर्तक गर्छ । कति घृणित स्वभाव र आचरणका छौ है तिमी बिभेदमा रमाउने हरु ।
समानुपातिक समाबेशिकरण किन ? के का लागि ? कस्को निम्ति? यसरी समाबेश बनाउने? भन्ने कुराको समेत ज्ञान् नभएका कथित मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा सद्भाव बिगार्ने चाहना राख्नेले आरक्षण कोटा हैन दलित कोटाको बिरोध गरेको देखिन्छ । समानुपातिक समाबेशिकरण सिद्धान्तका आधारमा भएका अभ्यास बारे बोध नगरी कोटा र कोठामा फरक छ / छैन । सत्य तथ्य नबुझि राणा,शासनको मुलुक ऎन १९१० ,नयाँ मुलुकी ऎन २०२० र मुलुकी देवानी सहिता २०७४ मा भएको कानुनी ब्यबस्थाको अध्यन र तुलनानै नगरी संविधानको मर्म र विशेषतालाइ ख्याल नगरी भवना र कल्पनामा डुबेर आबेग र उतेजनामा डुबेर असफलताको रोदन किन दलितलाई पोख्ने ? दलितको योग्यता माथी प्रश्न गर्ने तिमी को हौ? योग्यता ,क्षमता र दक्षता आत्मानुभुती गर त ? समानुपातिक र समाबेशिकरण ठिक छैन भन्ने प्रमाण छ तिमी छ ? छैननि । आरक्षण बाट सबै भन्दा बढी लाभ यिनैले लिएका छन । आफ्ना अभिभाकले असफलताको दोष दलितलाई लगाएर ढाटिरहेका हुन्छन ।
बर्ग संघर्सको कुरा लगाउछन । दलित हैन बिपन्न दलितले पाउनु पर्छ आरक्षण भन्छ्न ।महिला,जनजाती ,मधेसी अपांग र पिछडिएका क्षेत्रका ९ जिल्लामा सबैभन्दा बिपन्न परिवार जो बालुवा चालेर भोको पेट भर्छन । यो देश हामी सबैको हो । मल्लकाल,राणाकाल,शाहाकाल पञ्चायतकाल केही अवशेष हरुले चारजात छत्तीस वर्ण मान्नुहोस ,गणतन्त्रका नागरिकले सबैको साथ ठान्नुहोस `म ममता,समता र सम्मानताको पक्षमा छु । घृणा तिरस्कार ,बहिस्कार ,अपमान र असमनताको पक्षमा छैन ।
मुसिकोट -७ रुकुम पश्चिम